Iza moa izahay? > Mino ny WKG > Ny fitsarana farany [fitsaràna mandrakizay]
Amin’ny faran’ny taona, Andriamanitra dia hanangona ny velona sy ny maty rehetra eo anoloan’ny seza fiandrianan’i Kristy any an-danitra ho amin’ny fitsarana. Hahazo voninahitra mandrakizay ny olo-marina, hohelohina any amin’ny farihy afo ny ratsy fanahy. Ao amin’i Kristy, ny Tompo dia manao fandaharana feno fahasoavana sy rariny ho an’ny rehetra, anisan’izany ireo izay toa tsy nino ny filazantsara rehefa maty. (Matio 25,31-32; Asan’ny Apostoly 24,15; John 5,28-29; Apokalypsy 20,11:15; 1. Timoty 2,3- enina ambin'ny folo; 2. Petrus 3,9; Asan'ny Apostoly 10,43; Jaona 12,32; 1. Korintiana 15,22- iray).
Fitsarana an'izao tontolo izao
»Ho avy izao ny fitsarana! Ho avy ny fitsarana! Mibebaha izao, fa raha mankany amin'ny helo ianao. » Mety efa naheno "evanjelistra an-dalambe" nampiely ireo teny ireo izy ireo izay manandrana mampatahotra ny olona amin'ny fanatanterahana an'i Kristy. Na, mety efa nahita olona toy izany faran'izay sarimihetsika miaraka amin'ny endrika mangdlin ianao.
Angamba tsy dia lavitra loatra ny sarin'ny “fitsarana mandrakizay” izay ninoan'ny kristiana maro nandritra ny taonjato maro, indrindra tamin'ny Moyen Âge. Azonao atao ny mahita sary sokitra sy sary hosodoko maneho ny olo-marina mihaona hihaona amin'i Kristy sy ny tsy marina izay tarihin'ny demonia lozabe.
Ireto sary ireto amin'ny Fitsarana farany, ny fitsarana ny fiafarana mandrakizay, dia avy amin'ny fanambarana ao amin'ny Testamenta Vaovao momba an'io. Ny Fitsarana farany dia ampahany amin'ny fampianaran'ny "zavatra farany" - ny fiverenan'i Jesosy Kristy, ny fitsanganan'ny marina sy ny tsy marina, ny faran'ny tontolo ratsy ankehitriny, izay hosoloana ny fanjakan'Andriamanitra be voninahitra.
Hazavain’ny Baiboly fa fisehoan-javatra lehibe ho an’ny olona rehetra niaina ny fitsarana, araka ny hazavain’ny tenin’i Jesosy hoe: “Fa lazaiko aminareo fa amin’ny andro fitsarana dia hampamoahina ny olona ny amin’ny teny tsy misy dikany rehetra izay lazainy. . Ny teninao no hanamarinana anao, ary ny teninao no hanamelohana anao » (Matio 12,36- iray).
Ny teny grika nadika hoe "fitsarana" izay nampiasaina tamin'ny andalan-teny ao amin'ny Testamenta Vaovao dia krisis, izay niavian'ny teny hoe "krizy". Ny krizy dia manondro fotoana sy tranga iray izay anaovana fanapahan-kevitra iray na fanoherana ny olona iray. Raha ny hevitr'izany, ny krizy iray dia teboka iray amin'ny fiainan'ny olona iray na eo amin'izao tontolo izao. Ny krizy manokana dia manondro ny fiasan'Andriamanitra na ny Mesia ho mpitsara an'izao tontolo izao amin'ny antsoina hoe Andro Farany na Andro Fitsarana, na azontsika atao ny milaza ny fiandohan'ny "fitsarana mandrakizay".
Nofintinin’i Jesosy toy izao ny fitsarana amin’ny hoavy momba ny hanjo ny marina sy ny ratsy fanahy: “Aza gaga amin’izany; Fa ho avy ny andro handrenesan’izay rehetra any am-pasana ny feony, dia hivoaka izy ireo, dia izay nanao tsara ho amin’ny fitsanganana ho fiainana, fa izay nanao ratsy kosa dia ho amin’ny fitsanganana ho amin’ny fitsarana” (Jaona. 5,28).
Nolazalazain’i Jesosy tamin’ny endriny an’ohatra koa ny toetran’ny Fitsarana Farany amin’ny fisarahana ny ondry amin’ny osy: “Fa raha tonga ny Zanak’olona amin’ny voninahiny, mbamin’ny anjely rehetra, dia hipetraka eo amin’ny seza fiandrianany Izy. voninahitra, ary ny firenena rehetra hangonina eo anatrehany. Ary hanavaka azy Izy, tahaka ny mpiandry ondry manavaka ny ondry amin’ny osy, ka hametraka ny ondry eo amin’ny ankavanany ary ny osy eo amin’ny ankaviany” (Matio 2.5,31- iray).
Ny ondry eo ankavanany dia handre ny fitahiany amin'ireto teny manaraka ireto: "Avia, ianareo izay notahin'ny Raiko, mandovà ny fanjakana izay efa namboarina ho anareo hatrizay niandohan'izao tontolo izao!" (V. 34). Ny osy amin'ny ankavia dia hampandrenesina koa ny niafaran'izy ireo: "Ary dia hilaza amin'izay eo amin'ny ankaviany koa izy hoe: Mialà amiko, ianareo voaozona, ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay, izay namboarina ho an'ny devoly sy ny anjeliny!" (V. 41).
Manome fahatokiana ho an’ny marina sy manosika ny ratsy fanahy ho ao anatin’ny fotoan-tsarotra tsy manam-paharoa io toe-javatra misy an’ireo antokon’olona roa ireo: “Jehovah mahalala ny hamonjena ny mahitsy amin’ny fakam-panahy;2. Petrus 2,9).
Miresaka momba an’io andro fitsarana roa sosona io koa i Paoly, ka nilaza azy io ho “andro fahatezerana hanehoana ny fitsarany marina.” ( Romana 2,5). Hoy izy: “Andriamanitra, Izay hanome ny olona rehetra araka ny asany: fiainana mandrakizay ho an’izay mitady voninahitra sy haja ary fiainana tsy mety maty amin’ny faharetana rehetra amin’ny asa tsara; Ny tsy rariny sy ny fahatezerana ho an’izay miady sy tsy mankatò ny marina, fa manaraka ny tsy fahamarinana” (and. 6-8).
Ny fizarana ara-Baiboly toy izany dia mamaritra ny fotopampianaran'ny Fitsarana Mandrakizay na Farany amin'ny teny tsotra. Izy io na toe-javatra; misy ireo navotana ao amin'i Kristy sy ireo tsy voatsabo ho very izay very. Ny ampahany sasany amin'ny fizarana vaovao dia manondro izany
Ny "fitsarana farany" dia fotoana sy toe-javatra izay tsy misy afa-mandositra. Angamba ny fomba tsara indrindra hahazoana tsiro amin'ity fotoana ho avy ity dia ny famakiana ampahany vitsivitsy manonona izany.
Ny Taratasy ho an'ny Hebreo dia miresaka ny fitsarana ho toy ny toe-javatra krizy izay hatrehin'ny rehetra. Ireo izay ao amin’i Kristy, izay voavonjy amin’ny asam-panavotany, dia hahazo ny valim-pitiany: «Ary tahaka ny nanendrena ny olona ho faty indray mandeha, ary rehefa afaka izany, dia ny fitsarana; fa tsy hiseho fanindroany noho ny ota Izy, fa ho famonjena izay miandry Azy » (Hebreo 9,27- iray).
Tsy mila matahotra ny fitsarana farany ny vahoaka voavonjy izay natao ho marina noho ny asa fanavotana nataony. Manome toky ny mpamaky azy i Jaona hoe: “Izao fitiavana izany no tanteraka amintsika, dia ny hananantsika fahasahiana amin’ny andro fitsarana; fa tahaka Azy no eto amin'izao tontolo izao koa. Tsy misy tahotra ny fitiavana "(1. Johannes 4,17). Ireo izay an’i Kristy dia hahazo ny valisoany mandrakizay. Hijaly ny ratsy fanahy. “Toy izany koa, ny lanitra ankehitriny sy ny tany, amin’izany teny izany, dia tehirizina ho amin’ny afo, ho amin’ny andro fitsarana sy fanamelohana ny ratsy fanahy.”2. Petrus 3,7).
Ny fiteninay dia milaza fa "ao amin'i Kristy Tompo dia manome fahasoavana sy fandaharana ho an'ny rehetra, anisan'izany ireo izay tsy nino ny filazantsara rehefa maty." Tsy lazainay hoe ahoana no amitan'Andriamanitra ny famatsiana toy izany, afa-tsy izay na inona na inona, azo atao amin'ny alalan'ny famonjen'i Kristy, ny toe-javatra izay efa voavonjy.
I Jesosy mihitsy no nanambara tamin'ny toerana maromaro nandritra ny asany teto an-tany fa raisina ho an'ny maty tsy misy evanjelika ny fikarakarana, fa izy ireo dia afaka mahazo famonjena. Nataony izany tamin'ny nanambarany fa hahitana fankasitrahana eny amin'ny fitsarana ireo mponin'ireo tanàna fahiny sasany raha oharina amin'ny tanànan'i Jodà izay nitoriany:
“Lozanao, ry Korazina! Lozanao, ry Betsaida! ... Fa ho moramora kokoa ny ho amin’i Tyro sy Sidona amin’ny fitsarana noho ny ho aminareo » (Lio 10,13-14). "Ny mponin'i Ninive dia hiseho amin'ny fitsarana farany amin'ity taranaka ity ka hanameloka azy ... Ny mpanjakavavin'ny atsimo [izay nihaino an'i Solomona] dia hiseho amin'ny fitsarana farany amin'ity taranaka ity ka hanameloka azy" (Matio 1. Kor2,41- iray).
Ireto ny olona avy any amin'ny tanàna taloha - Tyro, Sidona, Nineveh - izay mazava ho azy fa tsy nanana fahafahana handre ny filazantsara na hahalala ny asa famonjena nataon'i Kristy. Saingy hitan'izy ireo ny fanamelohana, ary amin'ny fahatongavany eo anoloan'ny Mpanavotra azy ireo dia mandefa hafatra manameloka an'ireo izay nandà azy tamin'ity fiainana ity izy ireo.
Jesosy dia nanao ihany koa ny fanambarana manaitra fa ny tanànan'ny Sodoma sy Gomora fahiny - ohabolana oharina amin'ny fahalotoam-pitondran-tena lehibe - dia hahita ny fitsarana lehibe kokoa noho ny tanàna sasany any Jodia izay nampianaran'i Jesosy. Mba hametrahana izany amin'ny toe-javatra mampahatahotra ny tenin'i Jesosy dia andao hojerentsika ny fomba nanehoan'i Jodasy ny fahotan'ireo tanàna roa ireo sy ny vokatr'izy ireo teo amin'ny fiainana noho ny asany:
«Na dia ny anjely aza, izay tsy nitana ny laharam-panahiny fa nandao ny tranony, dia notazoniny tamin'ny famatorana ny andro lehibe tamin'ny fatorana mandrakizay tao amin'ny maizina. Ary toy izany koa Sodoma sy Gomora ary ny tanàna manodidina, izay, toa azy ireo, dia nijangajanga ka nanenjika nofo hafa, ohatra, dia napetraka ary mijaly amin'ny fampijaliana afo maharitra mandrakizay "(Jd 6-7).
Fa Jesosy nilaza ny amin’ireo tanàna amin’ny fitsarana ho avy. “Lazaiko aminareo marina tokoa fa ho moramora kokoa ny ho amin’ny tanin’i Sodoma sy Gomora amin’ny andro fitsarana noho ny ho amin’ity tanàna ity [dia ny tanàna tsy nandray ny mpianatra]” (Matio 10,15).
Izany dia mety milaza fa ny fisehoan-javatra amin'ny Fitsarana Farany na ny Fitsarana Mandrakizay dia tsy mifanaraka amin'ny zavatra eken'ny kristiana maro. Sholley C. Guthrie, teolojia efa niasa farany, dia nanoro hevitra fa tsara ny hamerina ny fomba fisainantsika momba an'io krizy io:
Ny voalohany nieritreritra fa ny kristiana rehefa mieritreritra ny faran'ny tantara dia tsy tokony hatahotra na hamaly faty ny hoe "ho ao anatiny" na "hiakatra" na iza "ho any ivelany" na "hidina". Tokony ho eritreritra feno fankasitrahana sy fifaliana izany satria afaka miandrandra amim-pahatokiana isika rehefa ny sitrapon'ilay Mpamorona, Mpampionona, Mpanavotra sy Mpanavotra indray no hanjaka indray mandeha - amin'ny fotoana rehetra ny fahamarinana momba ny tsy fahamarinana, ny fitiavana ny fankahalana sy ny fitiavan-tena, ny fandriampahalemana noho ny fankahalana, ny maha-olombelona noho ny tsy fanetren-tena, ny fanjakan'Andriamanitra dia handresy ny herin'ny maizina. Ny fitsarana farany dia tsy ho fanoherana an'izao tontolo izao, fa ho tombontso'izao tontolo izao. Vaovao tsara izany, tsy ho an'ny kristiana ihany, fa ho an'ny rehetra!
Eny tokoa, izany no tena zava-dehibe indrindra, anisan’izany ny fitsarana farany na ny fitsarana mandrakizay: ny fandresen’ilay Andriamanitry ny fitiavana amin’izay rehetra manakana ny fahasoavany mandrakizay. Noho izany, dia hoy ny apostoly Paoly: “Rehefa afaka izany, dia ny farany, izay hatolony ho an’Andriamanitra Ray ny fanjakana, rehefa nofoanany ny fanapahana rehetra sy ny hery ary ny fahefana rehetra. Satria tsy maintsy manapaka izy mandra-panaon’Andriamanitra ny fahavalony rehetra eo ambanin’ny tongony. Ny fahafatesana no fahavalo farany horinganina »(1. Korintiana 15,24- iray).
Izay hitsara izay nohamarinin’i Kristy sy izay mbola mpanota amin’ny Fitsarana Farany dia tsy iza fa i Jesosy Kristy, izay nanolotra ny ainy ho vidim-panavotana ho an’ny rehetra. “Fa ny Ray tsy mitsara olona”, hoy i Jesosy, “fa ny fitsarana rehetra dia nomeny ny Zanaka” (Jaona 5,22).
Ilay mitsara ny marina, tsy evanjelika ary na ny ratsy fanahy aza dia izy no nanome ny fiainany mba hahafahan'ny hafa hiaina mandrakizay. Jesosy Kristy dia efa naka fitsarana ny amin'ny ota sy ny ota. Tsy midika izany fa ireo izay mandà an'i Kristy dia afaka misoroka ny fizahan-toetra izay ho fanapahan-kevitr'izy ireo manokana. Ny endrik'ilay mpitsara mamindra fo, i Jesoa Kristy dia milaza amintsika fa tiany ny hananan'ny olona rehetra fiainana mandrakizay - ary hatolony ho an'ireo izay mino azy.
Ireo izay voantso ao amin'i Kristy - izay "voafidy" tamin'ny fifidianana an'i Kristy - dia afaka miatrika fitsarana amim-pahatokiana sy fifaliana, satria fantany fa ny famonjena azy dia ao aminy. Ireo tsy nitory ny filazantsara - ireo izay tsy nanana fahafahana handre ny filazantsara ary mametraka ny finoany an'i Kristy - dia hahita koa fa ny Tompo dia nanao fandaharana ho azy ireo. Ny fitsarana dia tokony ho fotoam-pifaliana ho an'ny rehetra satria hiroso amin'ny voninahitry ny fanjakan'Andriamanitra mandrakizay izay tsy hisy afa-tsy ny hatsarana ho an'ny mandrakizay.
8 Shirley C.Guthrie, Fotopampianarana Kristiana, Fanontana nohavaozina (Westminster / John Knox Press: Lousville, Kentucky, 1994), p. 387.
Ny fampihavanana rehetra
Ny fampihavanana manerantany (universalisme) dia midika fa ny fanahy rehetra, na fanahin'ny olombelona, ​​na anjely na demonia, dia voavonjy amin'ny alàlan'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny mpanaraka sasany amin'ny Fotopampianarana ao amin'ny Sorompanavotana rehetra dia milaza fa tsy ilaina ny fibebahana amin'Andriamanitra sy ny finoana an'i Kristy Jesosy. Betsaka amin'ny Fotopampianaran'ny Sorompanavotana rehetra no mandà ny fotopampianaran'ny Trinite, ary maro amin'izy ireo no Unitarian.
Mifanohitra amin’ny fampihavanana maneran-tany, ny Baiboly dia miresaka momba ny “ondry” miditra ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra sy ny “osy” miditra amin’ny famaizana mandrakizay (Matio 2.5,46). Tsy manery antsika hanaiky lembenana ny fahasoavan’Andriamanitra. Ao amin’i Jesoa Kristy, izay nofidin’Andriamanitra ho antsika, no voafidy ny olombelona rehetra, kanefa tsy midika izany fa hanaiky ny fanomezan’Andriamanitra ny olombelona rehetra amin’ny farany. Tian’Andriamanitra hibebaka ny olombelona rehetra, kanefa Izy no namorona sy nanavotra ny olombelona ho amin’ny tena fiombonana Aminy, ary ny tena fiombonana marina dia tsy mety ho fifandraisana an-tery mihitsy. Milaza ny Baiboly fa hisy olona hiziriziry amin’ny fandavany ny famindram-pon’Andriamanitra.